Ntụkọ | Tụlee Uru na ọghọm nke PMS dị iche iche & Ndị njikwa ọwa
You nwere onye mgbazinye ezumike ma ọ bụ onye na-elekọta ụlọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ njikwa ihe onwunwe? You nwere ike ịchọ ngwa ọrụ kachasị mma iji bido azụmaahịa gị dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ihe ngwọta gị ugbu a anaghị ewepụta ihe ịchọrọ n'ezie. Tụle uru na ọghọm nile dị mkpa iji zere imehie nnukwu ihe. Some chọrọ enyemaka? Nọgide na-agụ ma ọ bụ na-agwa onye otu anyị Team nyere aka inyere gị aka na usoro mkpebi gị.
Ma ị bụ onye njikwa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ, onye nwe ụlọ ọbịa, onye ọrụ nke ụlọ ndị a na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ ezumike, enwere obi abụọ na ọtụtụ isi ihe mgbu ị na-anwa idozi.
Mgbe ị na-achọ azịza, ihe ngosi niile na-adị mma ibido. Ma ozugbo ị debanyere aha, ị ghọtara ngwa ngwa na ihe niile na-egbuke egbuke abụghị ọlaedo! Ọ nwere ike isiri gị ike ịmata ọdịiche dị n’etiti ngwa ọrụ na atụmatụ ndị dị adị belụsọ ma ị jiri PMS ma ọ bụ njikwa ọwa tụnyere n’oge gara aga.
N'ime usoro ederede dị mkpirikpi, Zeevou ga-atụnyere njirimara na arụmọrụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ na nke ya. Mee elu mee ala, ọ dị gị n’aka ịhọrọ PMS na / ma ọ bụ njikwa ọwa nke kachasị dabara n’ihe ị chọrọ dị ka njikwa ihe onwunwe nke ụdị ọ bụla. Anyị nwere olile anya na ihe ntinye ngwaahịa ndị a ga-enye nkọwa zuru ezu-na-enyocha ma nyere gị aka ịbịaru nhọrọ ziri ezi.
Zeevou na nke Rentivo
Zeevou na nke OwnerRez
Zeevou na onye na-eburu gị ngwa
Zeevou na Lodgify
Zeevou na iGMS
Zeevou na-anabata ndị ọbịa
Zeevou na Smoobu
Zeevou na nke Eviivo
Zeevou na aka nwoke
Zeevou na Kigo
Zeevou na Tokeet
Zeevou na NewBook
Ọ bụghị na ndepụta ahụ?
Naanị rịọ otu ma anyị ga-elekọta ndị ọzọ!
rịọ maka ihe atụ
Mefu awa na-adịghị agwụ agwụ na demos iji nwaa ma chọpụta ezigbo isi ihe dị iche iche na ndị na-eweta ya bụ ọrụ siri ike ma na-ewe oge. Na Zeevou, anyị raara onwe anyị nye na-enyere ndị ọrụ mmekọ anyị aka ịchekwa oge dị ka o kwere mee. Yabụ, iji belata mbọ ị na-achọ ịchọta azịza zuru oke maka gị, na Zeevou anyị na-enye 1: 1 Ihe ngosi efu nwere oge dị mkpirikpi site na ntinye akwụkwọ. Ọzọkwa, ndị otu anyị ewepụta oge lelee ndị njikwa ọwa ndị ọzọ, Ngwongwo Njikwa Systems (PMS) na ndị na-enye engine ntinye akwụkwọ na ahịa.
N'ịgwa ndị nwere ike ịnabata ndị ọbịa na demos ma na-eme nyocha ọzọ, anyị gbalịrị ime ka ozi a gbasaa na ntụnyere bara uru n'etiti atụmatụ Zeevou na nke ndị na-eweta ndị ọzọ, iji nyere aka gosipụta otu anyị si edozi ụfọdụ isi ihe mgbu. N'ezie, ụfọdụ n'ime ndị asọmpi anyị ga-enye ụfọdụ atụmatụ nke anyị nwere ike ghara ịdị, yabụ, anyị anwaala ịkpa oke na eleghị mmadụ anya n'ihu na nyocha anyị. Na Zeevou, anyị na-anwa ịkọwa ma nyefee ya.
Anyị na-atụ anya na ntụnyere ndị a bara uru mgbe ị na-anwa ịhọrọ onye njikwa ọwa kacha mma ma ọ bụ PMS maka mkpa gị na 2021.